Global Voices teny Malagasy » Indoneziana Mpiasa An-trano Milaza Ho Voadaroka, Nomena Sakafo Ambany Foitra, Nodorana Tao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Janoary 2014 1:51 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Indonezia, Fanoherana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sendikà, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
An'arivony maro ireo nifamory tamin'ny 19 Janoary 2014 hitaky ny rariny ho an'i Erwiana Sulistyaningsih, Indoneziana mpiasa an-trano izay voalaza fa nampijalian'ny mpampiasa azy. Sary avy amin'i Hong Wong
[Mpanoratra miasa an-tsitrapo no nanoratra ity lahatsoratra ity ho an'ny tranonkalam-baovao inmediahk.net, izay voatonona ato anatin'ny tatitra.]
Tranga iray mampivalaketraka miresaka fanararaotana natao taminà mpiasa an-trano iray no niseho masoandro tao Hong Kong tsy ela akory izay. Ny 19 Janoary 2014, an'arivony maro ireo Indôneziana mpiasa an-trano sy mponina any an-toerana no nitaky ny rariny ho an'i Erwiana Sulistyaningsih, mpiasa an-trano izay voalaza fa nanaovan'ny mpampiasa azy fitondra tsy mendrika nandritry ny volana maro.
Tonga tao Hong Kong ity mpiasa an-trano 23 taona ity tamin'ny May 2013 ary nanomboka niasa ho anà fianakaviana iray tao Tsueng Kwan O, ka nolazainy fa voadaroka kibay sy fanantonana ‘rideau’ isan'andro izy tao nandritry ny valo volana noho ny filazana azy ho “tsy mahavita ny asany”. Vokatry ny fifanarahana tsy maintsy natao momba ny fomba fiainana tao, tsy azony natao ny mivoaka mifandray amin'ireo namany vehivavy mpiasa an-trano hafa mba hila vonjy. Tsy vitany na dia ny handositra aza satria nogiazan'ny masoivoho mpitady mpiasa an-trano nampiditra azy niasa ny ‘passport’, izay tsy niraharaha afa-tsy ny nandray ny saran'ny tolotr'asany avy amin'ny karama isam-bolan'ireo mpiasa an-trano ary ninia tsy nahalala ny antso vonjy nataony.
Notaterin'ireo mpampahalala vaovao avy any an-toerana fa tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Hong Kong izy no hita ny 10 Janoary 2014 teo ary “rakotra tataka sy doro” ka naiditra hôpitaly avy hatrany taorian'ny nodiany an-tanindrazana tany Java, Indonezia. Ankoatra ireo tataka mivandravandra, ny tatitra ara-medikaly voalohany dia nahita fahavakisan-taolana any anaty lohany. Raha ny marina, dia navelan'ny mpampiasa azy handeha izy noho izy efa nila tsy ho afa-mamindra intsony vokatry ny ratrany.
Hita tao amin'ny seranampiaramanidin'i Hong Kong tamin'ny 10 Janoary 2014 niaraka tamin'ireo ratra mivandravandra nandrakotra ny tenany i Erwiana Sulistyaningsih. Sary avy amin'i Apple Daily News, tsy azo ampiasaina hitadiavam-bola
Vao tonga tany amin'ny hôpitaly, nolazain'i Sulistyaningsih tamin'ireo mpampahalàla vaovao fa “voadaroka isanandro izy, nodorana ary tsy nahazo nihinana afa-tsy mofo sy vary fotsiny amin'izao in-droa isan'andro. Amin'ny 1 tolakandro hatramin'ny 5 hariva ihany izy no mahazo alàlana hatory fa tsy amin'ny alina”. Raha ny marina dia tsy izy no voalohany amin'ireo mpiasa an-trano tao amin'ity fianakaviana ity nitaraina noho ny fanararaotana natao azy ireo; raha kely indrindra dia mpiasa an-trano roa hafa efa niasa tao amin'io mpampiasa io no niteny fa efa niaina zavatra tahaka izao
Miasa miaraka amin'ny mpanao gazety ireo vondrona mpikatroka mafàna fo mba hanao tsindry hisian'ny politika hampitsaharana ity rafi-panandevozan'ny andro maoderina ity . Auyang Lunfa avy amin'ny inmediahk.net, tranonkalam-baovaon'olon-tsotra ao an-toerana, dia nitatitra avy eny amin'ilay famoriam-bahoaka  ny fijoroana vavolombelona nataon'ny iray tamin'ireo mpiasa an-trano :
Nanambara i Susie, vahiny mpiasa an-trano, fa izy koa dia noararaotina sy tsy nomen'io mpampiasa io sakafo teo anelanelan'ny 2011 sy 02012. Sary avy amin'ny kaonty Twitter Tom Grundy
Nilaza ilay Indoneziana mpiasa an-trano, Susi, fa efa niasa ho an'io mpampiasa io koa izy teo anelanelan'ny Aprily 2010 sy Martsa 2011. Nandritry ny 11 volana, noraràna izy tsy handao ny trano fonenany ary noterena hiasa ora 20 isan'andro. Voadaroka ihany koa izy. “Isak'izay misy zavatra kely tsy nety nataoko, dia tsy maintsy ho voadaroka aho”, hoy izy. Sady midaroka azy amin'ny kobay ilay mpampiasa azy taloha no manolana ny sofiny ihany koa, efa nandrahona an'i Susi indray mandeha i Law sady niteny taminy hamono tena. Nitalaho taminy i Susi, niteny hoe: “Manan-janaka roa aho, aza mangataka ahy hamono tena.” Lazain'i Susie fa tsy nandoa ny vola 3.580 dolara Hong Kong tokony ho karamany isam-bolana ilay masoivoho mpitady mpiasa [eo amin'ny 480 dolara Amerikana eo]. 6.000 dolara Hong Kong monja [eo amin'ny 880 dolara Amerikana] no nomena azy tamin'ny volana faha-11 nifaranan'ny asany. Nitondra ny momba azy teny anivon'ny polisy i Susi [taorian'ny nipoahan'ny raharaha Sulistyaningsih]
Eni Lestari, vahiny mpiasa mpila ravinahitra sady mpanentana, no namoaka fa misy Indoneziana iray hafa, mpiasa an-trano antsoina hoe Tina niasa ho an'ny fianakaviana Law nandritry ny telo volana tamin'ny 2011. Nomena sakafo ambany foitra ihany koa i Tina, niasa nihoatra ny tokony ho izy ary voadaroka. Nitondra ny nanjo azy teny anivon'ny polisy i Tina, niaraka tamin'ny fanampian'ireo namany ary nahavita niala tamin'ilay asany. Amin'izao fotoana izao dia ao Singapour i Tina no miasa.
Tsy nasianà fandalinana mihitsy ny tranga nahazo an'i Tina, araka ny tatitry ny mpampahalala vaovao avy ao an-toerana. Ny polisy ao Hong Kong nilaza fa tsy ampy ny porofo nentina teo anatrehan'izy ireo. Rehefa napoakan'ireo mpampahalala vaovao ao an-toerana ny raharaha Sulistyaningsih, napetraky ny pôlisin'i Hong Kong ho eo anaty lisitry ny “tranga misaritaka” satria hoe tsy ampy hahafahany mihetsika ny porofo eo am-pelatanany.
Vehivavy tao an-toerana nifamory tamin'ny andron'ny 10 Janoary 2014 mba haneho ny fanohanan-dry zareo an'i Erwiana Sulistyaningsih. Sary avy amin'ny pejy fanentanana ao amin'ny Facebook “Justice for Erwiana! Justice for Migrant Domestic Workers!” (Ny Rariny ho an'i Erwiana, Rariny ho an'ireo Mpiasa an-trano mpila ravinahitra)
Nandritr'iny herinandro lasa iny, nanao fanentanana hitakiana ny rariny ho an'i Sulistyaningsih ireo fikambanan'ny mpila ravinahitra sy mpikatroka mafàna fo avy ao an-toerana, nahitàna hatramin'ny “Misiôna ho an'ireo Mpiasa Mpila Ravinahitra”, ny “Amnesty International (Hong Kong)”, ny “Open Door”, ny Fikambanan'ny Vehivavy Mpiasa an-trano ary ny Fiaraha-mientan'ireo Sendika ao Hong Kong. Ny hetsi-panoherana natao tamin'ny faran'ny herinandro dia niezaka ny hamoaka ny tsy firaharahiana efa nataon'ny polisin'i Hong Kong hatry ny ela tamin'ireo antso vonjy avy amin'ireo mpiasa an-trano, hatramin'ny politikam-panavakavahana sy fanararaotana, ahitàna ny fifanarahana tsy maintsy natao momba ny fiainana anatiny  ary ny fepetra momba ny fe-potoana 15 andro fahazoana mipetraka, hatramin'ny tsy fisian'ny fiarovana ny karama farany ambany indrindra sy ny fetr'ora fiasàn'izy ireo. Efa ho volana vitsy tany aloha tany, nitranga ny adihevitra tahaka izany rehefa niseho masoandro ny tantaran'ny fanararaotana nanjo an'i Kartika Puspitasari. 
Kisary anazavàna ny politikam-panararaotana manjo ireo vahiny mpiasa an-trano. Sary avy amin'ny pejy Facebook fanentanana “Justice for Erwiana! Justice for Migrant Domestic Workers!”
Mivandravandra izao fa mila miatrika andraikitra ny governemanta ao Hong Kong momba ny fepetra marefo iainan'ireo vahiny mpiasa an-trano ao Hong Kong. Post 852, sehatra iray vao napetraka ho fanehoankevitra,dia nanazava  ny mizàna mitanila misy eo amin'ny fifandraisan'ireo mpampiasa sy ny mpiasa an-trano ary nanome soso-kevitra :
Samihafa amin'ireo mponina ao an-toerana, avahana ireo vahiny mpiasa an-trano eny anaty fiarahamonina ary dia miaina teo-draharaha sarotra noho izany. […] zara raha manana namana ireo vahiny mpiasa an-trano ary tsy misy ao Hong Kong ny fianakavian-dry zareo. Tsy misy mahalàla mihitsy hoe araraotina anie ikalakely any. Na dia mety ho mahafantatra mpiasa an-trano tahaka azy ao Hong Kong aza ireo mpiasa an-trano ireo, tsy mifankahafantatra adiresy akory. Rehefa giazan'ireo mpampiasa an-dry zareo ny findainy, dia mety ho tapaka tanteraka koa ny fifandraisany amin'izao tontolo izao.
Ankizy maro no nanatevina laharana ilay famoriam-bahoaka ho fanohanany ny mpitaiza azy ireo. Sary avy amin'ny pejy fanentanana ao amin'ny Facebook “Justice for Erwiana!”
[Ara-poto-kevitra] tokony hanome tolotra toy ny fiantohana ny fitsidihana fianakaviana ho an'ireo mpiasa an-trano ireo masoivoho mpitady mpiasa. Kanefa, ireny fitsidihana ireny tsy voafaritra mba hiantohana ny fitoniana sy fahaleman'ireo mpiasa an-trano ireo, fa ny hamahàna ny olan'ny fifandraisana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa an-trano (ny tena tanjona dia ny hanome vàhana ireo mpampiasa). Raha toa ilay mpiasa ka misafidy ny “tsy hitsidika fianakaviana” rehefa mameno ny fifanarahan'asa, dia tsy voatery ny fandefasana azy hody hitsidika havana.
Ny marina dia afaka ataon'ny governemanta ny manery ireo masoivoho mpitady mpiasa ireo mba hiantoka ny fitsidihan'ireo mpiasa an-trano ny fianakaviany, raha tsy izany dia tsy hahazo fahazoan-dàlana hanao ny asany ry zareo. Na azon'ny governemanta apetraka ihany koa ny ekipany hanao fitsidihana an-tselika an'ireny mpiasa an-trano ireny na hitaky tafatafa manokana ifanaovan'ireo mpiasa an-trano amin'ny manampahefana
Vokatry ny tsindry avy amin'ireo fikambanan'ny mpila ravinahitra sy ny kaonsily Indoneziana, ny niafarany dia nandefa tarika mpanao fanadihadiana ho any Indonezia  ny polisin'i Hong Kong sy ny departemantan'ny asa tamin'ny 20 Janoary mba haka ny fijoroana vavolombelona ataon'i Sulistyaningsih, hatramin'ny tatitra ara-medikaly momba azy avy amin'ny hôpitaly.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/21/57128/
 nanaovan'ny mpampiasa azy fitondra tsy mendrika : http://hongwrong.com/maid-abuse/
 rafi-panandevozan'ny andro maoderina ity: http://world.time.com/2014/01/15/beaten-and-exploited-indonesian-maids-are-hong-kongs-modern-day-slaves
 nitatitra avy eny amin'ilay famoriam-bahoaka: http://www.inmediahk.net/node/1020294
 politikam-panavakavahana sy fanararaotana, ahitàna ny fifanarahana tsy maintsy natao momba ny fiainana anatiny: https://globalvoicesonline.org/2013/10/01/abuse-low-wages-and-little-freedom-the-life-of-hong-kongs-foreign-maids/
 ny niafarany dia nandefa tarika mpanao fanadihadiana ho any Indonezia: http://thehousenews.com/society/%E8%AD%A6%E6%96%B9%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E7%BD%B26%E4%BA%BA%E8%B5%B4%E5%8D%B0-%E7%82%BA%E5%A4%96%E5%82%AD%E8%A2%AB%E8%99%90%E6%A1%88%E8%92%90%E8%AD%89/